Irbit निष्पक्ष: वर्णन, इतिहास, रोचक तथ्य र समीक्षा
Irbit तीन शताब्दीयौंदेखि निष्पक्ष, दोस्रो मात्र Nizhny Novgorod रूस मा महत्व र स्कोप मा दोस्रो, थियो। यो पहिलो उल्लेख भएको सत्रौँ शताब्दीको 30 वर्ष सम्बन्धित। त्यो समय देखि, यो सालाना 1929 सम्म भएको थियो। परम्परागत मेला को पुनरुद्धार 2003 मा भयो। अब यसलाई लेट अगस्ट हरेक वर्ष आयोजित छ।
Irbit निष्पक्ष: विगत र वर्तमान
आधिकारिक, नदी Irbit मा पहिलो पटक fairground पर्वहरू 1643 मा आयोजित थियो। बाह्र वर्षअघि दुई नदी को confluence मा Irbit छेउछाउको आए। सानो गाउँमा 31 किसान परिवार द्वारा Inhabited। एउटा महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग बस्ती स्थित तेजी भयो, र सानो स्थानीय Torzhok प्राप्त सबै भन्दा ठूलो व्यापार मंच को मूल्य।
Babinov बाटो भएको irbit निष्पक्ष युरोपेली रूस र साइबेरिया लिङ्क, एक प्रमुख सार्वजनिक thoroughfare थियो। ठूलो परिमाणमा थप unremarkable छेउछाउको मा झिकेर जो स्थानीय व्यापारीहरू र विदेशी व्यापारीहरू लागि Goldmine।
ती दिन, यहाँ तपाईं मात्र सबैभन्दा मूल्यवान साइबेरियन फर उत्कृष्ट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ चिनियाँ रेशम र चिया, पाठाहरूलाई मध्य एशिया बाट विशेष लाउने लुकाउँछ। मास्को व्यापारीहरू धातु लगे पनि यूराल देखि आभूषण र कारखाना उत्पादन ल्याए।
fairground पर्वहरू विभिन्न अवधि मा छ हप्तामा दुई हप्ता देखि लामो थियो। सामान्यतया, आफ्नो आचरण को समय शरद ऋतु र जाडो महिनामा परे। आज मेला बस चार दिन आउँछ र अगस्ट को अन्त सारियो।
"महान् टी रोड" मा
अत्यन्तै युरोप मा मूल्यवान, एक महंगा वस्तु - सबै irbit निष्पक्ष को पहिलो किन्न र बेच्न जहाँ साइबेरियन furs स्थानको रूपमा प्रसिद्ध थियो। तर, इतिहास को अन्धकारमा अर्को रोचक तथ्य गुमाए: यो चिया व्यापार मा पहिलो एकाधिकार गठन भएको अठारौँ शताब्दीमा Irbit यहाँ छ।
Babinov पर्चा मा भयो जो "महान् टी रोड", चिनियाँ को वितरण र मूल्य निर्धारण मा एक एकाधिकार एउटा सानो शहर मा निष्पक्ष बनाउन "तरल सुन।"
परम्परागत उपकरण उचित
Irbit यसको शुरूआत देखि निष्पक्ष उच्च आत्म-संगठनको विचित्रताहरू प्रदर्शन गरेको छ। निर्वाचित आयुक्त व्यापारीहरू, आफ्नै समूह वा उद्योग देखि प्रत्येक को सामान्य परिषद मा। त्यसपछि उचित समिति अधिकृत र यसको अध्यक्ष नियुक्त गठन। यस समिति को जिम्मेवारी संगठनात्मक र वित्तीय मुद्दाहरू मात्र छैन समाधान, तर पनि अर्डर मर्मतसम्भार र contentious मुद्दाहरू दुवै व्यापारीहरु बीच बन्दोबस्त संग चार्ज, र तिनीहरूलाई र खरीदारों बीच भएको थियो।
समय, फेयर धेरै छैन मात्र स्वतन्त्र व्यापारीहरू, तर पनि ठूलो राज्य संगठन, बैंक, परिवहन हुर्किसकेका छ, व्यापार घरहरू यो भाग लिए।
हुआ Irbit निष्पक्ष देखि उन्नाइसौँ शताब्दीमा द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार को फर केन्द्र, र त्यो थप जस्तो गर्न थाले , एक वस्तु विनिमय क्लासिक निष्पक्ष बजार भन्दा।
यी दिन, शहर को विशेषताहरू एकदम फरक कार्यक्रम छ। को Irbit निष्पक्ष मूल्य लामो संसारको दुई भागहरु जडान, एक प्रमुख किनमेल केन्द्र गुमाए। यसको पुनरुद्धार - यो बरु परम्पराअनुसार एक आदर, शहर को इतिहास को स्मृति छ। आज, उज्ज्वल रंगीन घटना भन्दा बढी पर्यटक आकर्षित उद्देश्य छ।
रूपमा अघि, यहाँ सक्रिय व्यापार औद्योगिक सामान जान्छ। तर, मुख्य जोड अझै पनि परम्परागत शिल्प र बिक्री हस्तनिर्मित सामान को प्रदर्शन छ।
निष्पक्ष व्यापार अभिन्न भाग लामो लोक कला र शिल्प उत्पादनहरु को एक बिक्री भएको छ। उत्पादन यूराल कारीगरों रूस भर प्रसिद्ध थिए। हामी सबै कथा Pavla Petrovicha Bazhova जसमा उहाँले यूराल पत्थर-cutters को कला वर्णन सम्झना। malachite र पहाड रत्न बनेको उत्पादनहरु साइबेरियन र चिनियाँ चिया को फर एक बराबरीको मा राम्रो हात "overman", मूल्यवान विदेशी व्यापारीहरू उपचार।
तिनीहरूले दानियल शानदार मास्टर साँच्चै अस्तित्व भन्छन्। यो प्रोटोटाइप आफ्नो पौराणिक यूराल prospector दानियल Zverev सेवा भनेर विश्वास छ।
Irbit निष्पक्ष: कारीगरों र अन्य मनोरञ्जन को शहर
हड्डी नक्काशी र पत्थर filigree सजावट, धातु उत्पादन यूराल बेल-निर्माता र ज्वैलर्स छैन कम फर र विदेशी सामान irbit निष्पक्ष महिमा को सजावटी चित्रकला।
आज, एक सय वर्ष पहिले को रूप मा, यूराल कारीगरों र कलाकारहरू को कौशल Irbit घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम Irbit कार्यशालाओं प्रदर्शन र बेचन लोक कला र शिल्प को आइटम लागि प्रत्येक वर्ष प्रदान मेला। मालिकको शहर - मात्र प्रदर्शनी क्षेत्र, किन्न कहाँ र बेचन स्मृति चिन्ह छ। यो भ्रमण, पुरानो यूराल को कला र शिल्प कार्यशालाओं को अद्वितीय वातावरण मा प्रवेश।
यहाँ सबैले आफैलाई एक "पहाड मास्टर अवस्थामा" पत्थर, आफ्नै भारी रंग ट्रे संग, फोर्ज मा हेर्न काम को आकर्षण महसुस र आफ्नो हात सन्टी छाल बनेको एक टोकरी बनाउन रूपमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई प्रयास गर्न आफूलाई तिहार को वातावरणमा डुबाउनु हुनेछ यूराल वसोवास को परम्परागत पोशाकहरू, र मौका गर्न indifferent जो कोहीले नछोड।
किन Irbit जाने
निस्सन्देह, शहर को जीवन मा मुख्य घटना irbit निष्पक्ष छ। बारेमा प्रतिक्रियाहरू यो ज्यादातर सकारात्मक छैन हुनत पूरा, पाठ्यक्रम, पैड र असुविधाको बिना। केही मानिसहरू कसैले आफ्नो मनपर्ने उत्पादन र स्मृति चिन्ह उत्तेजित गर्दछ, तर उचित तमाम छाप सबैभन्दा आशावादी छन्, भीड रुचि छैन।
एक दिन योजना छ सबै हेर्न शायद पर्याप्त छ, र पूर्ण कार्यक्रम निष्पक्ष चार दिनको लागि पनि छैन नरमाइलो गरिनेछ।
साथै, Irbit अन्य आकर्षण, छ इतिहास पनि inextricably सबैभन्दा शहरमा कार्य को लागि महत्वपूर्ण संग जोडिएको छ। के तपाईं पूरा मा निष्पक्ष आनन्द भने, तपाईं Irbit ऐतिहासिक र एथ्नोग्राफिक संग्रहालय मा हेर्न गर्नुपर्छ। रूस मा सबै भन्दा ठूलो संग्रह को एक दुर्लभ प्रदर्शन को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। स्थायी प्रदर्शनी पनि Irbit निष्पक्ष समर्पित छ।
"इतिहास संग" पुरानो घरहरू प्रेम मार्ग निर्माण खुसी हुनेछ। eloquently यो अन्तिम शताब्दीको "उचित Irbitsky पाना" को शहर कह अभिव्यक्ति लागि के अर्थ बारे - "फेयर मा हुँदा र मल जानुहोस् - यो रोम मा हुन र पोप देख्न जस्तै हो"। विशाल भवन, को उन्नाइसौँ शताब्दीमा erected, जीवन Irbit मेला को केन्द्र थियो। पत्थर व्यापार पङ्क्तिहरू यसलाई अगाडि क्षेत्र रूस कोस्ट्रोमा व्यापार मा सौन्दर्य र सबै भन्दा ठूलो को मात्रा गर्न कमसल छैनन्। Alas, अब आफ्नो स्थान, खाली धेरै मा। आज खण्डमा निर्माण यसको अभिप्रेत उद्देश्य को लागि प्रयोग गरिन्छ: यो briskly पूर्व मात्रा र विलासिता बिना, पाठ्यक्रम, व्यापार जान्छ, यद्यपि।
एशिया, दक्षिण-पूर्वी, मध्य र मध्य को मानिसहरूका
संलग्न - यो छ ... कसरी मनोवैज्ञानिक संलग्न छ? स्नेह वा प्रेम?
आफ्नो हातले क्रिसमस Nativity दृश्य: एक मास्टर वर्ग। एक Nativity दृश्य आफ्नो हातले कागज बनेको कसरी बनाउने?
के पटल twitching पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ?
म भूगोल मा एक कम्पास किन चाहिन्छ?
पेंशन दर्ताको लागि कस्ता कागजातहरू आवश्यक छ?